यस तथ्यको बावजूद कि विवाहको परम्परा र परम्परा सबै जनताको लागि फरक छन्, सबैसँग एक सामान्य लक्ष्य छ - परिवारलाई खुशी र समृद्धि ल्याउन। केही शताब्दी अघि सबै अनुष्ठानहरूले विशेष पवित्र अर्थ राख्ने धार्मिक क्रियाकलापहरूको प्रदर्शनमा समावेश गरेका थिए। आजकल, धेरै मानिसहरूको लागि, विवाहको चलनले आफ्नो वास्तविक अर्थ गुमाएको छ, र अधिक मनोरञ्जन गर्दै छन्।
विभिन्न किसिमका विवाहको चलन
अन्य परंपराहरू जस्तै, विवाहका परम्पराहरू लगभग सबै राष्ट्रहरूमा धेरै परिवर्तनहरू छन्। कम से कम परिवर्तनहरू मानिसहरू जीवित रहने संस्कृतिमा देखा पर्छन्, जसले आफ्ना पुर्खाहरूको परम्परा पालन गर्दछ। प्राय: नियमहरु र ग्यारेन्टी को पालन पछि धार्मिक विश्वास संग जोडिएको छ। मुस्लिम, जिपिसी, अर्मेनियाली विवाहका अनुष्ठान र चलन लामो समयसम्म परिवर्तन भएन, ठीक छ किनभने यी मानिसहरूको जीवनको बाटो सानो भयो। साथै, शहरहरूबाट टाढा बसोवासमा परम्परा संरक्षण। यो ताल र जीवनको बाटोको कारण हो, जुन त्यस्ता ठाउँहरूमा व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन हुँदैन। तर मानिसहरूका बीचमा जसलाई उनीहरूको परम्पराको सम्मान र स्थापित नियमहरूमा कडा रूपमा पालन गर्दछन्, धेरै चलन र अनुशासनले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ र सरल हुन्छ। उदाहरणका लागि, ओसनेटियन विवाहको अनुष्ठान र चलन, भित्ता र दुलहीको साथ प्रभावकारी भए तापनि दुल्हन र दुल्हन दुवैको लागि पर्याप्त कठोर आवश्यकताहरू फरक भयो। दुल्हनले आमाबाबुलाई छुडौती तिर्नुपर्ने थियो, र एक प्रतीकात्मक तर धेरै प्रभावकारी रकम थिएन। विवाह पछि दुलही, वास्तव मा, नयाँ घर मा दास बन्यो, काम को थोक प्रदर्शन गर्न को लागी बाध्य भयो। तर समयको साथ, त्यस्ता परम्पराहरू एकदम सरल बनाइएका छन्, जुन दैनिक जीवनमा न केवल परिवर्तनको कारण हो, तर मानिसहरू बीचको सम्बन्धमा पनि। विवाहको कजाखो परम्पराहरूमा समान परिवर्तनहरू देखिएका छन्, जसमा धेरै संस्कारहरू यस दिनको लागि बनिन्छन्, तर सरलीकृत संस्करणमा।
विंटेज सीमा शुल्क र परम्पराहरु
तर ठूला ठूला शहरहरूमा, विशेष गरी प्राविधिक रूपमा विकसित गरिएका देशहरूमा, विवाहका समारोहहरू सहित प्राचीन परम्पराहरू पूरा गर्न लगभग असम्भव छ। तर, तथापि, विवाह मनाउनु अघि, यो तपाईंका पुर्खाहरूको परम्परा अध्ययन गर्न उपयोगी छ। लोक रस्त्रीहरूको प्रयोग न केवल अतिथिहरूको लागि मनोरञ्जन हुन सक्छ। पूर्वाग्रह र अन्धविश्वासको बावजूद, प्राचीन अनुष्ठानहरूले धेरै पीढ़ीहरूका लागि मानिसद्वारा संचित ज्ञान समावेश गर्दछ। र यदि तपाईलाई थाहा छैन कि विवाह कसरी अविस्मरणीय बनाउने हो भने, तपाइँ सुरक्षित तरिकाले आधुनिक प्रवृति र प्राचीन परम्पराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। यो आवश्यक छैन, निस्सन्देह, अनुष्ठान प्रयोग गर्न, को अर्थ स्पष्ट छैन वा शङ्काको कारणले। तर यो हामी रोचक छैन किनकि हामी आफैं पारंपरिक अनुष्ठानहरु लाई सीमित गर्छौं, जस्तै युवा रोटी र नुन भेट्टाउने, दुलही दुलही र छुडौतीको दुरुपयोग।
स्लोभिक जातिहरूको पुरातन परम्परा, रूसी विवाहको संस्कार र परम्पराहरू सहित, रोचक अनुष्ठानहरूमा अमीर हुन्छन्, जुन केवल शानदार छैन तर ती गहन अर्थ पनि छन्। तर वास्तवमा, वास्तवमा एक विवाह हरेक व्यक्तिको जीवनमा एक मोटो मोड हो, र जवान परिवारको भाग्यले कसरी उत्सव पाउनेछ भनेर निर्भर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, पुरानो समयहरूमा स्लाइस प्रथाहरू केवल एक परिवार बनाउनका लागि उल्लेखनीय थिए, तर यो जवानको आनन्दको लागि। त्यसोभए, मेलमिलापको दौडान, एक सम्झौता समाप्ति गर्न सकिन्छ, जसमा पारिवारिक जीवन सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू निर्धारण गरिएको थियो। उदाहरणका लागि, दुलहीका आमाबाबुले यो कुरालाई सोध्न सक्छ कि सम्झौताले आफ्नो छोरीको लागि अनावरणमा रोक लगाएको छ। अनुबंधको उल्लङ्घन गर्दा, दोषी पार्टी को लागी रकम तिरिएको थियो रकम। आज सम्म, विवाह सम्बन्धी अनुबंध पनि छ, तर नियमको रूपमा, आधुनिक अनुबंधमा मात्र भौतिक मुद्दाहरू छलफल गरिन्छ। मेलमिलापको अप्रचलित अनुष्ठान पनि ठूलो महत्व थियो। विवाहको व्यवस्था गर्नु अघि, म्याग्मेस्टरहरूलाई फैंसी केटी वा केटाको घरमा पठाइएको थियो, जसले सोचेका थिए विवाहको लागि आमाबाबुको सहमति पाउनुहोस्। उनीहरूको जीवन अनुभवको आधारमा, आमाबाबुहरूले बच्चाहरूलाई गल्तीबाट बच्न सक्थे, किनकि पुरानो दिनमा त्यहाँ कुनै तलाक थिएन, छनौट मात्र एकपटक बनाइयो। यसबाहेक, मञ्चको अनुकूलन रमाइलो र हास्य समारोहहरू पूरा भएको थियो, जसले विवाहलाई सदाचार प्रदान गर्यो, र यो अनुकूलले आमाबाबु र सम्पूर्ण परिवार र दुल्हन र दुल्हनको आदर देखाए।
त्यहाँ धेरै विवाह समारोह र प्रथाहरू छन् जसमा तपाईं छुट्टी मजा, सुन्दर र यादगार बनाउन सक्नुहुन्छ। आखिर, यस दिन जीवन भर मा केवल एक पटक हुन्छ, र यो मुस्कान र आनन्द संग याद गर्नु पर्छ, धेरै पछि, धेरै वर्ष पछि।
मानिसहरू किन पत्नी परिवर्तन गर्छन्?
विवाहहरू के हुन्?
पीच रंगमा विवाह
किन पतिले पत्नी-मनोविज्ञान गर्दैनन्
कसरी उनको पतिबाट छुटकारा पाउनु?
पतिको खजाना, कसरी व्यवहार गर्ने - एक मनोवैज्ञानिक को सल्लाह
आमाबाबुलाई कसरी मिलाउने?
विवाह गर्नु किन?
कसरी उनको पतिलाई माफी माग्ने?
एक मुस्लिम को लागि विवाहित
विवाहित शैली "शैली" मा
एक करोडपतिलाई विवाह गर्दै
दुल्हन र दुल्हनको वेडिंग नृत्य
निलो हुँदा गहिरो गले
सजावटी प्लास्टर रेशम
आन्तरिकका लागि सजावटी फूलहरू
छतको लागि लैंप
हस्तान्तरण - बिर्सने
मेगन फक्स उंगलहरू
कृत्रिम खानाको साथ नवजातमा कब्ज
पानी आपूर्तिको लागि कलेक्टर
मधुमेह mellitus प्रकार2- आहार र लोक उपचार संग उपचार
समुद्र तट वेडिंग ड्रेस
बच्चाको जन्मको डर कसरी हटाउन?
हेलोवीनका लागि मेकअप - गुडिया
टग्रिडिया - ल्यान्डिंग र खुला मैदानमा हेरविचार
टुक्रा टुक्रा बनाइएको फर्श
फैशन प्रवृतिमा बाल रंग 2015
बन्स के हो?
मणि राम्रो र खराब छ
कोठामा स्पेसको ज्यान लिन मोबाइल विभाजन
कुत्तों मा सिस्टाइटिस - संकेत
डेन्ड्रफ को लागि चिकित्सीय शैम्पू